Ugu yaraan 10 qof oo ku geeriyootay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 10 qof oo ku geeriyootay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
September 14, 2021 Puntland Mirror Somalia 0
Goobta uu qaraxa uu ka dhacay. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa geeriyootay kadib markii qof isa soo miidaamiyay uu isku qarxiyay makhaayad ku taala Muqdisho galabnimadii Talaalada, sida ay sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow xero tababar oo ay leeyihiin ciidamada milatariga.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro hore oo noocaan oo kale ah sheegatay masuuliyadooda.
Qaraxa ayaa imaanaya iyadoo dalka uu ka jiro khilaaf xoogan oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo raysulwasaaraha kaasoo ka dhashay gabar katirsan haayada sirdoonka oo la waayay.
Boorame-(Puntland Mirror) Jabhad cusub oo hubeysan ayaa ka soo baxday gobolka Awdal ee Somaliland, sida lagu sheegay muuqaal lagu daabacay baraha bulshada. Jabhada oo la magacbaxday Cawaale ayaa sheegtay in ay hubka u qaateen sidii [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa muddo bil ah hakisay dhammaan doomaha kalluumeysiga ee dibada ka yimaada, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada kadib kulan ay yeesheen golaha wasiiradda. Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda [...]